परिक्षा हुने, नहुने अन्योल : चिन्तामा विद्यार्थी
आइतवार, माघ ११, २०७७ ०९:१०:२६ युनिकोड
नेकपा जुम्ला एकताबद्ध, भ्रममा नपर्न अध्यक्ष सचिवको आग्रह
केपी ओलीको अहंकारवाद र निरंकुशताका बिरुद्ध लड्न अध्यक्ष शाहीको आग्रह
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा विश्वामित्र संज्याल नियुक्त
प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु
प्रदिप ज्ञवाली ओली पक्षीय नेकपाको प्रवक्ता
ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भइसकेको छ : प्रचण्ड
केन्द्रको असरले कर्णाली सरकार परिबर्तन नहुने,अन्य प्रदेशमा फेरबदल हुने
मंगलवार, श्रावण १३, २०७७ यार्सान्यूज
काठमाडौँ । करिब ४ महिनाको बन्दाबन्दी सकिएर सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका अधिकांश कार्यालयहरु, सार्वजनिक बसहरु खुलेपनि लामो दुरीका बसहरु अझै संञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । होटल, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द नै रहेका छन् । पहिला कोरोनाको डर थियो जोखीम कम थियो तर अहिले जोखीम बढी छ डर कम छ न त कुनै सुरक्षाको उपाय नै छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउनको कारण स्थगित भएका परिक्षाहरु असोज अगाडि नै गर्ने निर्णय गरेसंगै लाखौँ विद्यार्थीहरु थप अन्योलमा परेका छन् । पूर्वान्चल विश्वविद्यालयमा त विद्यार्थीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । किनकी लामो लकडाउनले गर्दा मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका र गाँउगाँउमा पुगेका विद्यार्थीहरुको नियमित पठन पाठन ठप्प छ ।
कोभिड-१९ को जोखिम बढेसंगै सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन जारी गरेको थियो । लकडाउनमा धेरै मानिस गाँउ फर्के त कति उपत्यकामै अलपत्र परेर बसे । त्यहीबिचमा सरकारले उपत्यकामा बसेकाहरुको लागि गाँउ जान लकडाउन खुकुलो गर्यो । पछि उपत्यका पुगेका सबै विद्यार्थीलगायत धेरै मानिसहरु गाँउगाँउमा पुगे ।
परिक्षा हुने सूचना जारी गरिएपछि विद्यार्थीहरु कसरी शिक्षण संस्थमा पुग्ने भन्ने थप अन्योलमा परेका छन् । बाढीपहिरोको कारण पहाडका सबै बाटोघाटो सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । भने तराईका अधिकांस ठांउहरु डुबानमा परेका छन् । कतिपय विद्यार्थीहरुको त आफ्नै घरसमेत डुवानमा परेको छ । त्यसले गर्दा गाँउगाँउमा भएका विद्यार्थीहरु शहर आउन सकिरहेका छैनन् ।
यता, परिक्षा हुने सूचना जारी भएको छ, विद्यार्थी भने गाँउगाँउमा छन् । आउनको लागि बसहरु भदौ १५ बाट मात्र संञ्चालनमा हुने भनिएको छ । यो बिचमा विद्यार्थीहरु कसरी आउने । मानसिक तनावमा गुज्रिएका विद्यार्थीले परिक्षा कसरी दिने ? एउटा सेमेस्टरको आन्तरीक मुल्यांकन गर्देमा के हुन्छ ? विद्यार्थीहरु न त आफु पढने कलेजको पहुंचमा छन् न त परिक्षाको तयारीमा नै । परिक्षा दिन विद्यार्थी जोखीम भएको गाँउबाट आउदा १४ दिन क्वारेन्टिन नबसी सिधै परिक्षा हल छिर्न पाउंछन् वा पाउंदैनन् ?
आज गाँउगाँउमा भएका विद्यार्थी परिक्षा दिन भनेर हिडेरै आइरहेका छन् । संक्रमित विद्यार्थीको स्वाव लिदा पोजेटिभ देखिएमा क्वारेन्टिन राख्ने कि परिक्षा हल ? लाखौ विद्यार्थीको संख्यामा परिक्षा लिदा एकजनामा पोजेटिभ भेटियो भने पुन परिक्षा बन्द गर्ने वा लाखौँ विद्यार्थीको जिम्मेवारी कसले लिने ? विश्वमै फैलिएको महामारीको कारण अन्य देशहरुमा पनि विद्यालय नखुलेका भने हैनन् तर बढदो संक्रमणमा कारण बन्द भएका हुंन् । महामारी वर्षोसम्म चलिरहन पनि सक्छ के जोखीम मोल्नुपर्ने विद्यार्थीले मात्र हो ? या त सरकारले विद्यार्थीको हितानुकुल भएर काम गर्छ ? यदि अहिले नै यो स्थितिमा परिक्षा गर्ने हो भने विद्यार्थीको परिक्षा नतिजा नेगेटिभ र कोरोनाको नतिजा पोजेटिभ देखिने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलवार, श्रावण १३, २०७७, ११:२३:००
एसईईको नतीजा एक साता भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी
नेकपाले बहुमतसहित ६ वटै प्रदेशमा बनाएका सरकार पार्टी विभाजनपछि संकटमा आइतवार, पुष १२, २०७७
नेकपा जुम्ला एकताबद्ध, भ्रममा नपर्न अध्यक्ष सचिवको आग्रह बिहिवार, पुष ९, २०७७
केपी ओलीको अहंकारवाद र निरंकुशताका बिरुद्ध लड्न अध्यक्ष शाहीको आग्रह बिहिवार, पुष ९, २०७७
प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु मंगलवार, पुष ७, २०७७
प्रदिप ज्ञवाली ओली पक्षीय नेकपाको प्रवक्ता मंगलवार, पुष ७, २०७७
ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भइसकेको छ : प्रचण्ड सोमवार, पुष ६, २०७७
केन्द्रको असरले कर्णाली सरकार परिबर्तन नहुने,अन्य प्रदेशमा फेरबदल हुने सोमवार, पुष ६, २०७७
नेकपाको आज स्थायी कमिटी बैठक बस्दै आइतवार, मंसिर २१, २०७७